Volley – Afrique U18 F : hiroso amin’ny fitiliana ireo mpilalao ny FMVB | NewsMada
Volley – Afrique U18 F : hiroso amin’ny fitiliana ireo mpilalao ny FMVB
Efa mivonona amin’ny fiatrehana ny fiadiana ny tompondakan’i Afrika U18 zazavavy eo amin’ny taranja volley ny federasiona malagasy. Hiroso amin’ny fifaninanam-pirenena izy ireo hitiliana ny ekipa nasionaly. Manoman-tena koa ny GNVB sy ny Stef’Auto.
Raikitra. Araka ny efa fantatra sy tapaka, nandritra ny fivoriamben’ny kaofederasiona afrikanin’ny volley na CAVB, ny 3 sy 4 desambra 2015, tany Algérie, hampiantranoan’i Madagasikara ny fiadiana ny tompondakan’i Afrika, taranja volley, sokajy U18 zazavavy. Hotanterahina eto Antananarivo, etsy amin’ny lapan’ny Fanatanjahantena Mahamasina, ny 17 – 27 aogositra izao, ity hetsika kaontinantaly eo amin’ny sokajy zandriny vehivavy ity.
Araka izany, ho fanomanana ny fandraisan’i Madagasikara io fiadiana ny tompondakan’i Afrika, sokajy U18 zazavavy io, hiroso amin’ny fitiliana ireo mpilalao handrafitra ny ekipa nasionaly ny federasiona malagasy (FMVB). Noho izany, hanatanteraka ny fiadiana ny tompondakan’i Madagasikara eo amin’ny sokajy U18 zazalahy sy zazavavy ny federasiona, ny 23 – 30 marsa izao. Amin’ny alalan’io hetsika nasionaly io mantsy no hahafahan’ireo teknisian’ny FMVB mitily sy mifantina ireo mpilalao. Izany hoe, hivoaka aorian’io ny lisitr’ireo mpilalao voaantso hanaraka fampivondronana.
Manomana ny GNVB…
Ankoatra izay, manana solontena amin’ny fiadiana ny “Coupe d’Afrique des Clubs Champions” na CACC ihany koa isika amin’ny alalan’ny GNVB, tompondakan’ny Zone 7, eo amin’ny lehilahy, sy ny Stef’Auto, eo amin’ny vehivavy.
Araka izany, efa manomana mafy ity hetsika ity ny GNVB, ekipan’ny zandarmariam-pirenena, amin’izao fotoana izao. Anisan’ny mpilalao nantsoin’izy ireo hanatevin-daharana azy i Lala Be, mpilalao malagasy any La Réunion. Tsy mbola fantatra kosa ny daty higadonan’ity mpilalao malagasy any ivelany ity eto an-tanindrazana manaraka ny fanazarantena miaraka. Marihina fa hotanterahina any Egypte, ny 21 marsa – 2 avrily izao, ny eo amin’ny sokajy lehilahy.
Any Kenya, ny 20 – 30 avrily kosa no handranto fifaninanana eo amin’ny sokajy vehivavy ny Stef’Auto, izay efa manomana mafy ihany koa, ankehitriny.